Hogaamiyaha al-Shabaab ayaa ku baaqay in la garaaco danaha Mareykanka iyo Faransiiska ee Jabuuti… – Hagaag.com
Hogaamiyaha al-Shabaab ayaa ku baaqay in la garaaco danaha Mareykanka iyo Faransiiska ee Jabuuti…
Hoggaamiyaha Xarakada Al-Shabaab, Abu Cubeyda Axmed Cumar ayaa ku baaqay in la garaaco danaha Mareykanka iyo Faransiiska ee Jabuuti.
Hogaamiyaha Xarakada ayaa Cajalad fiidiyow ah oo la baahiyey fiidnimadii Sabtida ku sheegay iyadoo wax ka yar laba toddobaad ka harsan tahay doorashada madaxweynenimada ee dalkan yar ee Geeska Afrika, hoggaamiyaha Al-Shabaab ayaa yidhi, “Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu u rogay dalka xarun ciidan, iyadoo ay ka dhex socoto qorshaynta iyo maaraynta dagaalka ka dhanka ah Muslimiinta Bariga Afrika. “.
Geelle ayaa wuxuu xukumayay Jabuuti tan iyo 1999 wuxuuna raadinayaa inuu ku guuleysto marki shanaad bisha April 9da ee sanadkan.
Maaddaama ay juquraafi ahaan ku taallo goob muhim ah oo xuduud la leh Afrika iyo Jasiiradda Carabta, kana soo horjeedda marinka Bab al-Mandab ee ku xidha Badda Cas Gacanka Cadmeed, Jabuuti waxay martigalisaa saldhigyo milatari oo badan oo shisheeye.
Gumeystihii hore ee Faransiiska ayaa Jabuuti ka jooga ciidankii ugu badnaa Faransiiska ee Afrika (qiyaastii 1500 oo askari).
Waxaa sidoo kale jira saldhiga kaliya ee joogtada ah ee Mareykanku ku leeyahay Afrika (4,000 oo askari) oo laga soo bilaabo howlgalada lagula dagaalamayo argagixisada, gaar ahaan kuwa Soomaaliya.
Sidoo kale Jabuuti waxaa joogitaan ciidan ku leh dalalka Japan iyo Talyaniga, sidoo kale Shiinaha, oo sanadkii 2017 ka sameystay saldhig militari iyo deked.
Dhinaca kale, ciidamada Jabuuti ayaa ka tirsan ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), kuwaasoo la dagaallamaya Xarakada Al-Shabaab e Soomaaliya.
Bishii Maajo 2014, ismiidaamiye ayaa weeraray maqaaxi ay ku caweeyaan ajaanibta ku sugan Jabuuti, taasoo sababtay dhimashada hal qof oo Turki ah iyo ugu yaraan 20 dhaawac ah, oo ay ku jireen 7 Faransiis ah iyo 4 Jarmal ah.
Al-Shabaab ayaa waxay sheegatay inay “weerartay maqaayad ay inta badan ka cunteeyaan saliibiyiinta Faransiiska iyo xulafadooda NATO.”